Iintengiso zikaGoogle Pixel ayisiyiyo into elindelwe nguGoogle | I-Androidsis
I-Google Pixel yenye yeendidi zeefowuni into ethile kwi-Android. Isizukulwana sesithathu sale nto sanikezelwa ukuwa okokugqibela kwaye saziswa kwiimarike ezininzi kunakuqala. Olu luhlu lweefowuni luchongwe ukungasebenzi kakuhle ezahlukeneyo Banantoni. UGoogle akazange abhengeze idatha yokuthengisa kwezi zixhobo. Nangona ifemi ingonelisekanga ngokupheleleyo.
Kwinkcazo yayo yeziphumo zekota yokuqala, ifemi isishiyile idatha enomdla omkhulu. Kuba bathe ukuba ezi I-Google Pixel ayithengisi kunye nenkampani engathanda. Ulwazi oluthi ngokungathandabuzekiyo lubhengeze ukubaluleka kwenkampani. Kwaye iyenza icace into yokuba ayisebenzi kakuhle.
Esi sisibhengezo esifika xa silungile iveki ukuba kuthiwe kubizwa iiPixels ezingabizi kakhulu, kulindeleke ukuba ibe semthethweni ngoMeyi 7. Ezi ntlobo zintsha, Ukucaciswa kwazo kuvuza kwezi veki, bonakalisa ukungena kwenkampani kwicandelo eliphakathi kuluhlu lwe-Android. Ngokungafaniyo neefowuni zangoku, ezaziziziphelo eziphezulu.
UGoogle uqinisekisile ukuba ukuthengisa kwesizukulwana sesithathu seGoogle Pixel bezingaphantsi kule kota yokuqala yonyaka, xa kuthelekiswa nentengiso yonyaka ophelileyo. Nangona, njengesiqhelo kwimeko yabo, abanikanga datha ithengisiweyo. Inkampani ayikaze isishiye nedatha yokuthengisa malunga neefowuni zazo. Kodwa inyani yokuba bayaqonda ukuba ukuthengisa kubi kakhulu kunokuba bekulindelwe linyathelo elibalulekileyo.
Esinye sezizathu esinikwe ukuthengisa kakubi kwezi Google Pixel 3 ngoxinzelelo kwisiphelo esiphakamileyo kwi-Android. Gcina ukhumbula ukuba Imakethi ephezulu yeselfowuni ilawulwa ziimpawu ezintlanu, abathathu kubo banesabelo esiphezulu: Apple, Samsung kunye neHuawei. Ke ngoko, yohlobo olufana noGoogle akukho lula ukufumana i-niche kweli candelo lentengiso neefowuni zabo. Le yinto egcina ibonakalisiwe kwezi ntengiso zibi.
Amaqhinga okufumana okungakumbi kwiGoogle Pixel 3 kunye 3 XL
Enye yeengxaki inkampani ejongene nayo, bubunzima bokuthengisa ezi Pixels zikaGoogle njengee-smartphones ze-premium. Ingakumbi ukuba kufuneka bakhuphisane neemodeli ezinje nge-iPhone, i-Samsung Galaxy S10 okanye uluhlu lweHuawei P30. Kubonakala ngathi olu thelekiso alusoloko luphuma kakuhle. Kwakhona, kukho iimveliso ezininzi kwi-Android eneemodeli eziphezulu ezinokuthi zigqithise iifowuni zikaGoogle kwaye zibe namaxabiso asezantsi, njenge-OnePlus okanye iXiaomi.
Ke ngoko, yenaInkampani ngoku iza kuzama ithamsanqa kuluhlu oluphakathi. Ukusukela kungaphelanga iveki kuza kubakho iPixel 3a kunye nePixel 3a XL. Bamele ukungena kwenkampani yaseMelika kwicandelo elitsha lemarike, apho balindele ukuba neziphumo ezingcono kunezo zifunyanwa ukuza kuthi ga ngoku kwimarike ephezulu. Nangona ngaphandle kokuthengisa okungalunganga kwindawo ephezulu, inkampani ibonakalise ukuzibophelela kwayo ekuqhubekeni nokwazisa iifowuni. Ke sinokulindela izizukulwana ezitsha zeGoogle Pixel. Ubuncinci yile nto bayithethileyo ngoku.
Iya kuba yinto enomdla ukubona ukuba ezi Pixels zikaGoogle zijolise njani kwikamva. Ukubona ubunzima abanabo kolu luhlu luphezulu, asazi ukuba uGoogle uza kuzisa utshintsho olubalulekileyo kuluhlu lwalo nyaka. Ukusukela ekwindla kuya kufuneka sibe neemodeli ezintsha. Rhoqo ngonyaka basishiya noluhlu kwinyanga yeDwarha. Kukwabalulekile ukubona ukuba iifowuni zakho eziphakathi ziya kuqhuba njani.. Ukuthengisa okuhle kuqinisekile ukukhuthaza inkampani ukuba isungule iifowuni ezininzi kwelo candelo. Ke ngoko, siya kujonga kwizicwangciso zenkampani kwezi nyanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Iiphikseli zikaGoogle azithengisi njengoko kulindelwe